Mozika Rap : Mitohy ny fifaninanana « End of the weak » -
AccueilVaovao SamihafaMozika Rap : Mitohy ny fifaninanana « End of the weak »
28/04/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Efa nanomboka ny fiandohan’ny volana. Mbola mitohy ny fifaninana karakarain’ny kolontsaina Mainty, ka hifantenana izay hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena atao Prague, any amin’ny repoblika Tchèque. Isaka ny tapa-bolana no hanaovana ny fifantenana etsy amin’ny « Peace&Rose » 67 ha ka mpifaninana 10 no hiatrika ny manasa-dalana. Hitohy hatramin’ny 27 Aogositra io fifaninanana io izay misokatra ho an’ny mpanao rap rehetra, na ireo efa manana ny lazany, na ireo vao misondrotra. Andiany faharoa amin’ny fifaninanana no hotanterahina ny alahady izao. Ireo mpifaninana hita mahafehy ireo sedra dimy mandritra ny fifanintsanana no hiatrika ny dingana manaraka. Epistolier raha tsiahivina no nisolo tena an’i Madagasikara tamin’ny taon-dasa tamin’ny fifaninanana tany Soisa. Nahazo ny laharana fahenina izy raha 14 ireo niatrika izany avy amin’ny firenena maromaro.
Amin’ny maha hetsika iraisam-pirenena ny « End of the weak », dia hanana tombony kokoa ireo mpifaninana mahafehy ny teny vahiny toa ny teny frantsay, anglisy… ankoatra izay ny fifehezana ireo kojakoja samihafa sy ny fihezahana hanolotra vokatra miavaka mitaha amin’ny mpifaninana hafa.
« tsy mahalala ny fitenintsika ny any ivelany, fa tsara foana mba misy marimaritra iraisana, amin’izay tsy very mihitsy satria mahay ny rap malagasy no sady afaka manao rap amin’ny teny vahiny, tsy mitsanga-menatra », araka ny fanazavan’i Big Tovo, avy amin’ny Kolontsaina Mainty.